Xaaladdii ugu adkeyd oo ka jirta Isbitaal Martini ee Muqdisho | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Xaaladdii ugu adkeyd oo ka jirta Isbitaal Martini ee Muqdisho
Wararka ka imaanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ay xaalad adag ka jirto Isbitaal Martini, ka dib markii bilaa naqas (Oxygen) uu soo wajahay isbitaalkaasi.
Isbitaalkan ayay Dowladda Federaalka ugu talagashay in lagu daryeelo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19 ee fayriska Corona uu keeno.
Wararka ayaa sheegaya in ku dhawaad boqol bukaan ahi ay xilligan xaalad deg deg ahi ku wajahayaan isbitaalkaasi, oo aanu ka jirin wax Oxygen ah, iyadoona laga cabsi qabo in tirada dadka xanuunka COVID-19 ugu dhimanaya isbitaalkaasi ay kororto.
Wararka ayaa intaa ku daraya in bukaanada ay u badan yihiin kuwo danyar ah, isla-markaana ay ku adag tahay in isbitaalada kale ee magaalada ka soo iibsadaan Oxygen-ka.
Ehelada bukaanada qaarkood oo la siiyay gaadiidka Ambulance-ka ayaa magaalada ka soo iibsaday Oxygen, si naqaskaasi loogu xiro kuwa ay jecel yihiin ee isbitaalkaasi ku xanuunsanaya.
Mid ka mid ah kalkaaliye-yaasha ka hawlgala isbitaalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in uu isbitaalku wajahayo xaaladdii ugu adkeyd, tan iyo markii uu xanuunka dalka ku soo laba kacleeyay, horaantii bishan February.
Kalkaaliyaha oo codsaday inaanan magaciisa Warbaahinta loo adeegsan ayaa sheegaya inaanay caawin karin bukaanada u baahan naqaska, ayna khasab tahay in isbitaalka uu helo Oxygen in ku filan ah.
Mar sii horeysay waxaa soo baxay warar sheegaya in uu aad u hooseeyo adeegga caafimaad ee isbitaalkaasi uu bixiyo, waana xilli uu COVID-19 si weyn ugu faafayo Caasimadda Muqdisho.
Maxamed Caafi oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa Dowladda Federaalka ku dhaliilay inay dayacday isbitaalkan, ka dib markii xaaskiisa oo sideed bilood oo uur laheyd ay Arbacadii daryeel la’aan ugu geeriyootay isbitaalkaasi.
Caafi oo la hadlay laanta afka soomaaliga VOA waxaa uu ka dhawaajiyay in qalabka caafimaad ee isbitaalkaasi aanu dhameystirneyn, taasina ay keeneyso in aysan bukaanadu helin daryeelka ay u baahan yihiin.
Wasaaradda Caafimaadka ayaa gacanta ku haysa Isbitaal Martini, oo ku yaala wadada kala qaybisa Degmooyinka Xamar Jajab iyo Xamar Weyne, waana isbitaalka keliya ee lagu baaro dadka isu arka astaamaha COVID-19.
Xaaladdii ugu adkeyd oo ka jirta Isbitaal Martini ee Muqdisho was last modified: February 22nd, 2021 by Admin
Madaxweynaha Puntland oo weeraray Ciidanka Kumaandooska Gorgor
Golaha Ammaanka Oo Cusbooneysiinaya Howlgalka AMISOM ee Soomaaliya.
Maraykanka oo mamnuucaya in carruurta ka yar labo sano la siiyo sokorta
Gudoomiye Cabdi Xaashi Oo Taageray Soo Jeedinta Puntland Ee Shirka Garoowe
Armenia oo shaacisay inay diyaar u tahay xabad-joojin ay la gasho Azerbaijan
Video:-Madaxweynaha Oo Maanta lagu Soo Dhaweeyay Magaalada Balan Bale